Polisim-pirenena : Efa vonona tanteraka ny fanadinana handraisana polisy vaovao – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2021 → février → 12 → Polisim-pirenena : Efa vonona tanteraka ny fanadinana handraisana polisy vaovao
Kama 12 février 2021 at 11 h 06 min · Edit
Efa vonona izany ireo hanaraka fiofanana mikasika ny fanorana eny an-dalambe, na eny amin’ny seranam-piaramanidina (PAF). Hiofana amin’ireo karazana famoretana, fanompana ny mpiara-belona, indrindra fa ny majinika. Ny ankamaroan’ireo pôlisin-tsika dia tsy misy mahalala fomba. Tsy mbola naheno aho na indray mandeha pôlisy iray ka mba niarahaba manao hoe: » salama tompoko ô, polisim-pirenena, azoko jerena ve atontan-taratasy mikasika ny fiaranao tompoko? » » Misaotra indrindra tompoko », »soava dia tompoko…. »
Kama 12 février 2021 at 11 h 05 min · Edit
Efa vonona izany ireo hanaraka fiofanana mikasika ny fandorana eny an-dalambe, na eny amin’ny seranam-piaramanidina (PAF). Hiofana amin’ireo karazana famoretana, fanompana ny mpiara-belona, indrindra fa ny majinika. Ny ankamaroan’ireo pôlisin-tsika dia tsy misy mahalala fomba. Tsy mbola naheno aho na indray mandeha pôlisy iray ka mba niarahaba manao hoe: » salama tompoko ô, polisim-pirenena, azoko jerena ve atontan-taratasy mikasika ny fiaranao tompoko? » » Misaotra indrindra tompoko », »soava dia tompoko…. »
Kama 12 février 2021 at 11 h 03 min · Edit